मुटु नै न भएकी दुनियाकै एक मात्र अनौठो महिला, मुटु बिना नै कसरी बाँच्न सफल भएकी छिन् ? - Kohalpur Trends
सलवा को ‘कृतिम मुटु’ एक झोलामा राखिएको छ, जसलाई उनी सधै आफ्नो काखमा राख्छिन । झोला सधैं उनिसँग एक ‘डिवाइस’को साथमा हुनेगर्छ, जसमा दुई ब्याट्री हुन्छ, जसको वजन 6.eight किलोग्राम हुन्छ, जुन एक इलेकट्रीक बिजुलिको तार, मोटर र एउटा पम्प पाएपको साथमा हुन्छ ।
यो पनि : कस्तो अवस्थामा लगाउन मिल्छ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन? काठमाडौं- नेपालमा बुधबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुँदै छ। बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ गर्ने तयारी भइसकेको छ।
पहिलो चरणमा कोरोना संक्रमण रोकथाम, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सहयोगी कर्मचारीहरु, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु, सार्वजनिक फोहोर संकलक सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शवबाहन चालक तथा सहचालक, कोभिड–१९ रोगबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवास्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने कर्मचारीलाई यो खोप दिइँदै छ।
नेपालमा बुधबारदेखि लगाइन लागेको कोभिसिल्ड नामक खोप भारत सरकारले १० लाख डोज अनुदानमा दिएको खोप हो। कोभिसिल्ड भ्याक्सिनक के हो? यसको प्रयोग, भ्याक्सिन दिनै नहुने अवस्था, खोप लगाएपछि हुनसक्ने समस्या, लक्षण कस्ता छन्? लगायतका विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप महाशाखाले तयार पारेको समाग्री :
के हो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन?
कोभिसिल्ड भ्याक्सिन भारतको सेरम इन्स्टिच्युट प्रालिले उत्पादन गरेको खोप हो। यो खोप भारतमा आपतकालीन प्रयोगको लागि स्वीकृत भई खोप लगाउन थालिएको छ।
नेपालमा यो खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि गत माघ २ गते स्वीकृत भएको हो। यो खोप १० डोज बराबर ५ मिलि प्रतिभायलमा उपलब्ध छ। यो खोप तयारी झोल अवस्थामा उपलब्ध छ। यो खोप सोलुसन रङविहीन वा थोरै खैरो, हल्का अपारदर्शी र कणमुक्त हुन्छ। यो खोपलाई जम्न दिनु हुँदैन। यदि जमेको छ भने प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो खोप फ्रिज भएमा हल्लाएर परीक्षण गर्न मिल्दैन।
यो खोपलाई २ डिग्रीदेखि ८ डिग्री सेल्सियसमा तापक्रम व्यवस्थापन गरी भण्डारण र ढुवानी गर्नुपर्छ। यो खोपको भायलमा म्याद गुज्रने अवधि लेखिएको हुन्छ। यो खोप उत्पादन भएको ६ महिनासम्म प्रयोग गर्न उपयोगी हुन्छ। यो भायलमा भिभिएम अर्थात् भ्याक्सिन भायल मोनिटर हुँदैन।
Previous Previous post: कालो शरीर र शरीर भरि रौँ भएका कारण सन्नीलाई रहेछ बाल्यकालको नमिठो अनुभव, आफ्नो नमिठो अनुभव सुनाउंदै खोलिन बिगत
Next Next post: चीन र भारत तर्फका ३० नाका खुल्यो